Ogeysiis:Bannaan-baxa 18ka may ee lagu muujinayo madax-bannaanida JSL oo bari ka dhacaya London. |
Ogeysiis:Bannaan-baxa 18ka may ee lagu muujinayo madax-bannaanida JSL oo bari ka dhacaya London.
Bannaan-bax loogu dabbaal degayo sannad-guurada 25aad ee lasoo noqoshada madax-bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland
Arbacada, 18 May 2016, 1:00 PM – 4:30 PM
25 sano ayaa ka soo wareegtay markii Jamhuuriyadda Somaliland dib u hanatay madax-bannaanidii ay heshay 26kii June 1960, taas oo dalal badan oo ay ka mid tahay UK aqoonsadeen.
Afar casho ka dib, 1dii July 1960 ayey Somaliland la midowday Somalia oo Talyaaniga ka qaadatay madax-bannaanideedii, markaas oo ay dhiseen Jamhuuriyaddii Somalia. Hase yeeshee waxay Somaliland midawgaas ka baxday 18 May 1991.
Haddaba iyadoo loo dabbaal degayo lasoo noqoshada xorriyadda Somaliland ee 25 jirsatay (Silver Jubilee), waxay bulshada Somaliland ee reer UK ku qabanaysaa bannaan-bax goobta la yidhaa Richmond Terrace oo ka soo horjeedda 10 Downing Street (Westminister).
Jamhuuriyadda Somaliland kaalin mug leh ayey ka cayaartaa ilaalinta nabadda iyo xasilloonida mandaqadda Geeska Afrika hadday tahay dhanka nabad gelyada,la dagaalanka budhcad-badeedda iyo argagaxisadaba. Wadankan curdinka ahi wuxu iska badbaadiyey burburka ay horseedeen dagaallada hoggaamiye kooxeedyada, argagixisada iyo nidaam la’aanta aafaysay jaarkooda.
Somaliland waxay dhidibbada u taagtay hay’ado dowli ah oo awood leh kuna dhisan mabaadii’da isu tanaasul siyaasadeedka, dimuqraaddiyadda iyo qabashada doorashooyin cod hal dheeri ah.
Ingineer Maxamed Balayax oo ah Somalilander firfircoon, xubinna ka ah guddiga abaabulka iyo qaban qaabada xuska 18 May ee UK, ayaa yidhi “halganka dadka Somaliland ay dib ugula soo noqdeen madax-bannaanidoodu, ma ahayn mid fudud. Waxaan hubaa in uu dalkeennu hanan doono aqoonsi caalami ah. Waxaase muhiim ah inaynu ahaano qaran ku midaysan himiladooda ” .
Inkasta oo ay dadka reer Somaliland ee UK u qabanayaan bannaan-baxan u dabbaal-degga 25 sano oo nabad iyo xasillooni ah, haddana ujeeddada dibad baxan waxa kale oo lagu muujinayaa sida xaq darrada ah ee dunidu dhegaha uga furaysatay aqoonsiga caalamiga ah ee Somaliland codsanayso iyo taageerada buuxda ee ay qurbajoogta Somaliland ee reer UK u hayaan madax-bannaanida Somaliland.
Rubuc qarniga Jamhuuriyadda Somaliland ay ahayd wadan jira laakiin aan la oqoonsan (de facto statehood), dalal badan oo cusub oo ay ka mid yihiin Eriteria, East Timor , Kosovo , dalalka badan ee Jamhuuriyadii hore loo odhan jiray Yugoslavia, Jamhuuriyadii hore checislovakia Koonfurta Sudan iyo dalal hore laysugu odhan jiray Soviet Union ayaa dhammaantood ku soo biiray bulshada caalamka ka dib markii ay heleen aqoonsi caalami ah.
Dhawaan isagoo la hadlaya jaaliyadda Somaliland ee reer UK Mudane Cali Adan Cawaale (Wakiilka Somaliland ee UK) ayaa waxuu yidhi, “18 May 1991 waxay ahayd maalintii aynu dalkeenna iyo dadkeenna ka badbaadinnay dhibka dariskeenna ku dhacday. Waxa ammaan mudan madaxdeennii maalintaa barakaysan qaatay go’aanka dib ula soo noqoshada madax-bannaanideenna ”
Somaliland waxa culays lagu saaray inay wada-hadallo la furto Somalia. Wada-hadaladaasi waxay noqdeen qaar ma dhaleys ah. Wax muuqata inaanay Somalia diyaar u ahayn in xaqiiqada la waajaho oo midawgii hagaasay laga noqdo, laguna noqdo labadii dal ee jaarka ahaa 30kii June 1960 oo kala madax bannaan. (sida ay yeeleen Jaarkeenna Sudan iyo Ethiopia oo madax-bannaidooda siiyey Koonfurta Sudan iyo Eriteria.
Duudsiga Somalia ee xuquuqda dadka iyo dalka Somaliland waa halis burbur iyo dagaallo cusub oo hor leh ka abuuri karta mandaqadda geeska Africa, sida keliya ee taas lagaga bedbaadi karaana waa dunida oo si xalaal ah uga garnaqda, una furdaamisa caqabadaha Somalia hor-dhigayso nabad waarta iyo horumar ka hana qaada Somaliland iyo Somalia.
Somaliland horey usoo martay dagaal dheer sannadihii 80-nadii kaas oo oo ay dawladdii Siyaad Barre ku soo qaadday dadka reer Somaliland, waxana hadda ka go’an Somaliland inay xejisato madax-bannaanideeda qiimaha weyn ku joogta.
Ugu dambeyntii banaan baxan waxaanu si qaddarin leh ugaga codsanaynaa Dowladda Biritan in ay ixtiraamto doonista iyo xaqa dadka reer Somaliland ee ay ku go’aansadeen la soo noqoshada madax-banaanidii ay Biritan 26kii Juun1960 ka qaadateen iyo inay maamuusto xidhiidhka taariikhiga ah ee u dhexeeya labada dal.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan bannaan-baxa fadlan kala xidhiidh
Maxamed O Maigag (Guddoomiyaha guddiga qaban qaabada 18 May ee UK) 07951016681 l
Wixii su’aalo saxaafadda ah fadlan la xidhiidh